Kudyara currant mumichero yechinyakare - mitemo uye nguva yekudyara kudarika fertilizer?
Kudyara currants mumichero yechitsva - nzira yekudzivisa zvikanganiso zvakanyanya?
Chero ani zvake anogara muzhizha anofanira kuziva kuti angadyara sei sarrant mumichero yechinyakare. Mutarisiri wemizambiringa munda uyu nguva dzose uchaonga nekuchengetedza kwakanaka kwekukohwa kwakanaka kwemakoroti ane utano. Kunyanya kukosha munyaya iyi kune kusarudzwa kwenzvimbo yekukura gwenzi, kushandiswa kwema fertilizer, kunyatsochengetedzwa kwekombiyuta kunoshanda.
Nzira yekudyara mheta mukati megore?
Kudyara mbeu muchero kunopa mhinduro dzakanakisisa kana uchishandisa midzi yakadzika midzi yakavharwa kana yakasununguka. Pane zviyero zvinobatsira kusiyanisa mumusika kana muimba inochengeterwa zvinhu zvine utano uye zvinokuvadza:
Zvinokurudzirwa kuwana michero ine 2-3 yakagadzirwa.
Usatenga chinyorwa chezviratidzo zvewilting kana kuti zvinotyisa pamashizha.
Kudyara currant pamba mumicheu yemichero ichave yakagadziriswa kuti ibudirire kana iine masero matatu kana masendimita masere.
Nyaya dzine midzi yakavharidzirwa inofanira kubviswa zvakanyanyiswa kubva mumudziyo paunenge uchitenga. Izvo nyika inomarara yemiti yakagadzirwa zvakanaka ine nguva dzose yakasungirirwa nemidzi.
Paunotenga currant muchitsime, sarudza maitiro akasagadzikana.
Dzivisa misika yepamusoro, zvinhu zviri muzvipfeko zvinodhura, asi kune ngozi shomanana yekutambura kubva patsva kusarudza kana kutenga mbeu inotapukirwa nemararamiro.
Ndekupiko kwaunogona kudyara i-currant panzvimbo iyi?
Ground yekudyara currants inofanira kusarudzwa zvakanaka. Iyi tsika inotarisa mvura, asi yakasvibiswa nyika, sod-podzolic nzvimbo, loam. Pamusoro pegungwa uye peat, iyo currant inokura zvakashata. Doroomite upfu kana choko rine lime inoshandiswa pane ivhu rakaoma uye pH yepasi pe 5.0. Kazhinji mabhesi anokura zvakasimwa pamuganhu, kwaanochengetedzwa zvakanaka nemasvingo uye masvingo ezvivako kubva kumhepo uye chisando. Mumumvuri wakaoma, mbeu ye currant yakaderedzwa, edza kuchengetedza kure nemiti yakareba kwete pedo 2 m.
Ndezvipi zviri nani kudyara ganda?
Iyi tsika inobva muhubernation kare kare, chaizvoizvo nekusvika kwekutanga kupisa, zvose zvinoenderana nemamiriro ekunze mune imwe nzvimbo. Miti yekudyara iyo currant mucheche inoda kusarudzwa pane imwechete, kuitira kuti mazai pamabazi ave asina nguva yekuzadza zvizere. Nguva yakanakisisa ndeyemagetsi echando, munguva iyi mutengi anogona kutotora kuona kuti gwenzi iri mupenyu, asi kushingaira kukura maitiro mukati mazvo kusati kwatanga.
Kururamisa kudyara kwe currant muchinyakare
Pasinei nokuti, iwe pachako unodyara kana kuti wakatengwa muchera, inokurudzirwa kunyatsotevedzera mitemo yekudyara currant munguva yegore. Kugadzirirwa kwegomba uye kuzadzwa kwevhu nezvinhu zvakakosha zvinoda ruzivo rwezvakananga zvekombiyuta yezvekurima, kukwanisa kunzwisisa marudzi akasiyana-siyana emumanyorera uye nzira dzekushandisa panzvimbo ino. Kune marudzi mazhinji emhando dzekudzivirira, kusiyana nesimba rekukura, nzira yehuta nekukanya michero, iyo inotanga kukanganisika uye inokonzera mimwe mibvunzo yakawanda kune vanotanga.
Nzira yekudyara mutsva wegwenzi mumhepo?
Berry tsika nekuchengetedza kwakanaka kunogona kuvapo panzvimbo yekusingaperi kwemakore anopfuura gumi, saka kudyara kwemucheri mutsvuku mumicheu yechinyakare kunofanira kuitwa kuburikidza nekodhidhi yekodzero. Zvisingatauri zvakasvibiswa nenyika mashizha nemidzi isina simba dzinotanga midzi, kazhinji dzichifa pamusana pekutanga, nzira iyi haifaniri kutarisirwa kubva kumakwenzi maduku ekohwa kwakanaka munharaunda yemuguta.
Kudyara kwemusiya weganda:
Zvinokurudzirwa kuongorora acidity yemubhedha pamubhedha, kana ichipfuura miitiro yakasarudzika, wobva wawedzera lime mumutengo we 300-800 g / m 2 usati wachera chimbo.
Tinochera pasi kusvika pakadzika 22 cm.
Kudyara mbeu muchero mumichero kunoitwa mugomba rine zviyero 55x55 cm nekudzika 45 cm.
Kana mushonga unoshandiswa panguva yekudyara, zvigadziri zvinofanira kudururwa pamusoro pepasi rakasara uye rakasara kusvika 7-10 masikati kuti usabvisa mukana wekupisa midzi isina simba ye currant.
Zvinokurudzirwa kugadzirira uye kuzadza gomba nemafungidziro kwemavhiki mashoma asati asvika musi wekudyara mugore, gore rakasununguka rinofanira kugadzirisa zvishoma.
Maererano nekombiyuta yakarurama, michero inodyarwa munguva yechitubu mumakomba kune imwe nzvimbo ye 45 °.
Isu tinoedza kuisa kosi yemudziro inenge 5-6 cm pasi pehupamhi hwepasi.
Kuwedzerwa kwemutsipa mukati kunokonzera mamwe maitiro akaumbwa, akakura maererano nekombiyuta iyi, mabhiza ane simba, maitiro akazara anoonekwa mugore rekutanga zvakare.
Midzi yemagwenzi inofanira kururamiswa kuitira kuti nyika yakafanana yakavhara nzvimbo pakati pavo.
Panguva yekukandwa kwegomba nevhu, mbeu yacho inofanira kuve ichizunguzirwa zvishoma, kuitira kuti zvishoma pasi pasi zvisikwa zvizadzike.
Mushure mekuvhara midzi nevhu, dururira kusvika kune 5 litita emvura pane imwe gomba.
Mushure mekunwa mvura, putira tsime zvachose.
Dururirai mvura yakasara kubva mubhari.
Fukisa ivhu nematope .
Iko kunotanga kutora kunoitwa kare kana uchidyara, uchisiya kusapfuura ma 3-4 tsvudzi dzakagadzirwa.
Nzira yekudyara ruvara rutsvuku mumvura?
Misiyano pakati pemhando dzakatsvuka uye nyeupe currants kubva kumarudzi akasiyana-siyana inowanikwa munzira yekuisa maruva, izvo zvinowanikwa mumatare emakore maviri nemakore ekuwedzera. Kudyara kwekudzivirira currant mucheche uye kuiswa kwemakomba kunoitwa zvichienderana nenzira yakawanda nemhando dzakasviba. Zvimwe zvakasiyana, munhu anofanira kuswedera pakusarudza kwenzvimbo yegwenzi rakapiwa. Krasnoplodnye marudzi akanyanya kusanaya kwemvura, anonamata zuva, haafariri penumbra kana mumvuri, kukura zvakanyanya pane zvakashata uye zvakaoma pasi.
Kudyara kwepitted currant muchechi?
Zvinofanira kuonekwa kuti ma berries ane stamping ari pasi pekushanda kwechando uye anoda urongwa hwe trellises, asi kuumbwa kunobatsira kwazvo. Kudyara kwepudding currant kunoita kuti zvive nyore kukohwa michero uye kuchengetedza nzvimbo yechirongwa. Mbeu iri muhupamhi hwepamusoro haina kuderedzwa nehutachiona uye hutachiona, shrub inotarisa inoratidzira kuve yakashongedza uye inova chishongo che dacha.
Nhamba dzekudyara kwe truncated currant:
Kugadzirira kwegomba uye kuzadza nemumanyorera kunoitika maererano nezvinodiwa chirongwa.
Mbeu muchitsime mugomba inofanira kuiswa zvakasimba.
Zvadaro zvakagadzirirwa kune rutsigiro rwakasimba.
Midzi yakanatswa, gomba rakavigwa uye mvura inobudiswa.
Kana uchinge uchisima mabhasi akawanda unofanira kuiswa trellis.
Pazvirimwa mukati megore, rimwe remashonga ane simba ane urefu hwe 0.8-1 m rinofanira kusarudzwa kuti rigadzire stem, iyo yose yebasal midzi inobviswa.
Pakati peputi rinobviswa.
Iko 3 yekumusoro yakasara yasara, zororo rose rakaputsika.
Nzira yekugadzira sei currant kana uchidyara mukati megore?
Maseroti paanenge achidyara currants mucheche anotamba basa rinokosha, rinofanira kuendeswa zvakananga mumugodhi wokudyara. Yakashanda kushanda manyowa, peat, mineral components. Izvo zvinodikanwa kuti zvinhu izvi zvinosanganiswa zvakanaka nevhu, zvichiparadzanisa kubva mumidzi yevhu nechepakati revhu rakajeka. Heano chiyeuchidzo chekuzadza mukati mekupedzisira kwegomba rekudyara re currant:
Kompositi - kusvika 10 kg.
Superphosphate - kusvika ku 200 g.
Sulfuric potassium - kusvika ku 40 g.
Mune gore ripi iro rakabereka michero mushure mekudyara?
Mune nyaya iyo apo currant inokurudzira mushure mokudyara, hutano hwekudyara kwekurima hunokosha. Pasi pemamiriro ezvinhu akadai, chibereko chokutanga chemucheka mutsvuku iwe unogona kutora nguva inotevera, uye mhando dzakatsvuka dzinowanzobereka chibage kwemakore maviri. Fruiting yakazara inotanga mu black currant pazera remakore mana, i-red-berry yakasiyana-siyana inokwanisa kupa muchero mukuru wegore rechishanu.
Afelandra: kumba kutarisira
Where is guanabana grow?
Ungachengetedza sei mukate mumusha?
Phloxes - kubereka nekucheka
Nzira yekuita sei bheji reborobheri mukuwa?
Kudyara gooseberry mugore
Bamboo kubva mbeu pamba
Mahonia papular - kubereka nemichero
Musha Rose - tsvuku uye kuwira mashizha
Croton - kuparadzirwa nemucheka
Tarot Manara - zvinoreva makadhi, kuti ungafungidzira sei Tarot Manara?
Zvikwata zvine floral print 2013
Nzira yekuwedzera libido: 15 mashizha ekushanda
Patties nemasikati cottage cheese - zvakanakisisa mapepipe nokuda kwekunakidza kwemafuro ezvokudya
Sopu isina nyama - mapeji anonaka anotora zviduku zvakaoma zuva rega rega
Strudel ne cherry
Kare 2018 - ndiyo yakanyanya kusveta haircut ne square bangs uye isina
Nzira yekufuka sei kumariro muzhizha?
Laser inofungidzira - ndeipi yemhando 6 dzetsika dzekusarudza ganda rako?
Nzira yekubvisa sei tsvimbo pairi?
Nzira yekugogodza sei kutonhora munguva yekudzivirira?
Nzira yekugadzirisa loggia - inonyanya kugadzirisa zvirongwa
Mheto yeOrthopedic yevana
Matafura ekurwisa pamuviri mushure mekuita chisina kudzivirirwa
Zvose zvakanga zvakavanzika kubva kwatiri: tsanangudzo yemuchato weumambo
Sensation! Makate anopa hangover
Kufananidza - chirevo uye zviratidzo, kudarika kufanana kunokonzerwa nekunyengera?